Warshadda jumlada dhadhanka liin jumlada jeermiska jeermiska disha jeermiska daryeelka shaqsiyadeed ee lagu tirtiro bakteeriyada qoyan Alaab-qeybiye iyo Soo-saare | Kafiican
Magaca Product: masaxa bakteeriyada
Lambarka Moodalka: QMSJ-327
Maaddooyinka firfircoon: Benzalkonium chloride, Nov-xidhka, Ro-water
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Aqua, Ethanol, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Parfum.
Cadad halkii awood: 200 tiriyaa
Maaddaama dadka adduunka oo dhami ay aad iyo aad ugu baraarugaan nolosha caafimaadka leh iyo nolosha nadaafadda, BEETER DAILY PRODUCTS CO., LTD waxay si isdaba joog ah u billowday masaxaadda aalkolada iyo jeermiska jeermiska iyo tirtiridda bakteeriyada, iyadoo rajeyneysa inay ka caawiso dad aad u tiro badan inay bixiyaan nolol badbaado leh, Caafimaad leh oo ku habboon. Sidaa darteed, waxaan diyaar u nahay inaan bixinno qiimo dhimista ugu wanaagsan intii suurtagal ah inta aan xakameyneyno kharashyada. Waxaan rajeyneynaa in dad aad iyo aad u tiro badan ay aqoonsan doonaan wax soo saarkeena.
Masaxaadda bakteeriyada ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo oo lagu nadiifiyo gacmaha iyo jirka, waxayna sidoo kale jeermis iyo nadiifin kartaa dusha sare ee walxaha. Xalka dawada ee masaxa antibacterialcontains waa mid khafiif ah oo waxyeelo yar u leh maqaarka. Laakiin haddii aad ku aragto xasaasiyad ama maqaarka raaxo-darro marka aad isticmaaleyso, fadlan jooji isticmaalkiisa oo raadso talo caafimaad.
Sida warshad masaxda qoyan, waxaan aaminsanahay inaan siino macaamiisha wax soo saarka ugu fiican iyo adeegga ugu fiican. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qaabeyno alaabooyinka u gaarka ah astaantaada. Waxaan haynaa qaacido dhameystiran. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo loogu talagalay dhadhanka masaxa qoyan, waxaan sidoo kale ku hagaajin karnaa qaaciddada iyadoo loo eegayo baahidaada.Waxaan sidoo kale leenahay koox naqshadeyn ah oo kaa caawin karta naqshadeynta baakadaha. Waad beddeli kartaa baakadda bacda ama baakadaha ku darsan kara.
Unugkan qoyan ee bakteeriyada ayaa la mid ah nooca masaxada aan soo saareyno waqtiyadii lasoo dhaafay. Cabbirka tirtiraha ayaa ku filan in maalin kasta la isticmaalo. Waxaa jira 200 masax oo qoyan halkii qasac, oo kufilan qoysku inuu isticmaalo mudo ah waqtiga ansaxnimada. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa in daaweynta loo isticmaalo guryaha, laakiin sidoo kale xafiisyada iyo meelaha kale.
Gacmo nadiifinta si loo yareeyo bakteeriyada maqaarka ku jirta.
Lagu taliyay in loo isticmaalo soo noqnoqda.
Ha ku riixin faraha faraha furitaanka.
Weelka si adag u xir meel qalalan, qabow oo hawo wanaagsan leh. Heer kulka lagu talinayo: O'C ilaa 40C.
Hore: Aqbal aqal-nadiifiyaha muraayadda Gawaarida lagu nadiifiyo masaxa maqaarka
Xiga: Miiska jikada lagu nadiifiyo ee saliida lagu nadiifiyo nadiifinta dufanka jikada
Cadka Qoyan ee Antibacterial
masaxaadda bakteeriyada ee saaxiibtinimada leh
Masarrada Antibacterial-ka ee Waaweyn
masaxa bakteeriyada dabiiciga ah
masaxaadda qoyan ee bakteeriyada ka hortagga ah
Yar oo la qaadan karo maalin kasta jeermiska-dila iyo ...